नेपाल आज | यामाहाको लुट जानौं, लुट्ने पनि चिनौं (लुटको लिस्टसहित)
यामाहाको लुट जानौं, लुट्ने पनि चिनौं (लुटको लिस्टसहित)
काठमाडौं । तपाईलाई यामाहा कम्पनीका मोटरसाइकल चढ्न मन पर्छ ? बलियो र पार्ट पुर्जा केही सस्तो पर्ने भ्रमका कारण यामाहाका मोटरसाइकल लोकप्रिय पनि छन् । तर यो ब्रान्ड जति लोकप्रिय छ त्यति नै खतरनाक र लुटेरा पनि छ ।
यामाहा कम्पनीका मोटरसाइकल नेपालमा पनि आधिकारिक विक्रेतामार्फत बिक्री हुन्छ । तर त्यो आधिकारिक बिक्रेताले कम्तिमा २१ प्रतिशतदेखि ६२ प्रतिशतसम्म नाफा राखेर उपभोक्ता ठग्दै आएको छ ।
तपाईलाई नाफा प्रतिशतमा विश्वास नलागेको पनि हुन सक्छ । त्यस्तो हो भने यामाहाको रे–जेडआर डिस्कको मूल्यबाट सुरु गरौं । यो मोटरसाइकल ११३ सिसीको हो । यसमा बिक्रेताले उपभोक्ताबाट ६२ दशमलव ९७ प्रतिशत नाफा लिने गरेका छन् । एउटा रे–जेडआर बेच्दा बिक्रेतालाई ७६ हजार रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । भारतबाट नेपाल ल्याउँदा यो मोटरसाइकलको सबै खर्च कटाएर बन्ने मूल्य भनेको १ लाख २० हजार ८१५ हो । त्यसमा व्यापारीले ७६ हजार भन्दा बढी जोडेर १ लाख ९६ हजार ९०० रुपैयाँ पुर्याउने गर्छन् ।
११३ सिसीको यामाहा रे–जेड आर ड्रममा पनि यस्तै छ हालत । यो मोटरसाइकल नेपाल ल्याउँदा परेको मूल्य हो १ लाख १६ हजार ७८९ रुपैयाँ । यसमा व्यापारीले ७३ हजार १११ रुपैयाँ जोडेर पुर्याएका छन १ लाख ८९ हजार ९०० रुपैयाँ । यो मोटरसाइकलमा पनि नाफा ६२ प्रतिशत भन्दा बढी छ ।
जुन मोटरसाइकलको लुक्स राम्रो हुन्छ, त्यसको मूल्य व्यापारीले आफूखुसी बढी राख्छन् । उपभोक्तालाई पनि त्यस्तै मन पर्छ । त्यसैमा धेरै लुटिन्छन् । यो हामी नेपालीसबैको दूर्भाग्य पनि हो । किनभने यसबारे अहिलेसम्म कुनै अनुगमनले काम गरेकै छैन ।
नेपालको कानुनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने भनेको छ । तर २० प्रतिशत नाफा कसैले पनि राख्दैनन् । यति नाफा राखेर उपभोक्ता लुटन सकिन्न । रातारात अर्बौ कमाउन सकिन्न । निष्ठाको व्यापार गर्नेले मात्रै हो २० प्रतिशत मात्रै नाफा राख्ने । तर मोटरसाइकलमा निष्ठाको होइन लुटको व्यापार हुने गरेको रहेछ । सबैभन्दा कम नाफा राखेर यामाहाको कुनै मोटरसाइकल बेचिन्छ भने त्यो हो यामाहा एजेड २५ । यो २५० सिसीको छ । कम बिक्री हुने भएकोले यसमा धेरै मुनाफा राखिएको छैन । त्यसै पनि यसको परल मूल्य २ लाख ८४ हजार भन्दा बढी छ । यसमा ६० हजार नाफा जोडेर बिक्रेताले ३ लखा ४४ हजार ९०० मूल्य कायम गरेका छन् ।
यो बाहेक कुनै पनि मोटरसाइकल छैन जसमा बिक्रेताले नलुटेको होस । नेपालको कानुनलाई गोजीमा बोकेर हिँड्ने वा भनौ उपभोक्ता लुट्ने चाहिँ को होलान त ? मोरङ अटो वर्क्स इन्टरप्राइजेज भन्ने कम्पनी छ नेपालमा । यसका मालिक हुन विष्णु अग्रवाल (तस्बिरमा)। अग्रवालले नेपालआजसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘त्यस्तो नाफा हुँदैन । धेरै खर्च हुन्छ । खर्च जोड्दा सिमित मात्रै नाफा हुन्छ ।’ अग्रवालको मोरङ अटो वर्क्स नै नेपालमा यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता हो ।
माेटरसाइकलमा भएकाे लुटबारे अनुगमन गर्ने अापूर्तिमन्त्री शिवकुमार मन्डलले प्रतिबद्रता जनाएका छन् । उनकाे प्रतिबद्ताले कति काम गर्छ केही दिनमै थाहा हुनेछ ।